Posted by အင်ကြင်းသန့် at 4:31 PM
အပြာရောင်နိုဝင်ဘာရဲ့ ပြာလဲ့လဲ့အချစ်တွေက ကဗျာထဲမှာ စီးမျောနေတယ်....။ ကြယ်လေးတွေနဲ့ အတူ လက်ခုပ်တီးပေးခဲ့ပါတယ်ညီမရေ...။
အနမ်းတွေကို ဝေမျှစားသုံးပစ်လိုက်တယ်...အိုး ရေရေလည်လည် လန်းတယ် ဗျာ လာရောက်ခံစားသွားပါတယ် ။
ကောင်းလိုက် လှလိုက်တဲ့ အပြာရောင်နိုဝင်ဘာ.... နိုဝင်ဘာလမှာ ဒီလိုလှတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့တင် ပြည့်စုံနေပါပြီ ဂျင်းဂျင်းရေ...။
ခွန် has leftanew comment on your post "အပြာရောင်နိုဝင်ဘာ":
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာလေး မမဂျင်း
ကဗျာတွေ သေချာမဖတ်ဖြစ်တာ ကြာပြီ။
နိုဝင်ဘာရဲ့ ပြာလဲ့လဲ့ နေ့ရက်များပေါ့လေ...၊စကားလုံး
သြ....ဒီကလေးတော်တော်တတ်နေပါပြီကော...... တိမ်တွေရော ကြယ်တွေရော ပြာတာတွေရော ဖြူတာတွေရောင် ...ရော...ရော.... ...အတွေးရောင်စုံသွားပြီ ဂျင်းစုတ်ရေ...လေထဲတိုက်ဆောက်တာကတော့ ဘယ်နှစ်လုံးဆောက်ဆောက် ဘယ်နှစ်ထပ်ဆောက်ဆောက် ဆောက်စေသတည်းးးးးးးးး
ခိုက်သွားတယ်.. အသည်းကို... :D
ဒီနေခ (ခ) Junemoe
ခိုက်သွားတယ်.. အသည်းကို.. :D
ဒီနေခ (ခ) ဂျွန်မိုး
ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ကို အပြည့်အဝ ဖော်ကျူးနိုင်တယ်...
ချစ်ကြပါဗျာ ချစ်နိုင်သူတွေ ချစ်ကြပါ...
ဒါနဲ့ စားစရာရှားလို့ ဗျာ အနမ်းတွေကိုမှ ဝေမျှစားသုံးရတယ်လို့ ...
မြင်ယောင်သွားပါတယ်ဗျာ ပြာယီးပြာယာနဲ့ အနမ်းတွေ ဝေမျှစားသုံးနေပုံကို ဟီ ဟိ...
အချစ်မရှိရင် ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းမှု မရှိနိုင်ပါဘူး
တစ်လက်စထဲ follower လဲလုပ်ခဲပပါတယ်နော်
ဂွတ်ပဗျား....ကဗျာလေးကောင်းချက် ထောင်းချက်တဲ့အတိုင်းပဲ :P
တဖိတ်ဖိတ်လက်နေတဲ့ ဗိမာန်ပဲမဟုတ်လား....။ :) love that stem.
ကဗျာလေးမိုက်တယ်. ခေါင်းစဉ်ကိုက လှတာ။
လက်စသပ်တော့ အပြာရောင် စောင်ကြီးခြုံပြီး ပုန်းနေတာကိုး.
အပြာရောင်နယ်မြေထဲမှာ လွတ်လပ် ပျော်ရွှင်စွာ ခိုဝင်နိုင်ပါစေ..
ကဗျာလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ ပျော်ရွှင်စရာ ချစ်သက်နှစ်ပတ်လေး ဖြစ်ပါစေ။ မဇွန်လာတာ နောက်ကျသွားလို့ ဆုတောင်း နောက်ကျသွားပေမယ့် အပြာရောင်နိုဝင်ဘာတစ်ရက် လှပစွာ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ ယုံလိုက်မယ်နော်။
မဇွန်အတွက်တော့ ဒီနှစ်နိုဝင်ဘာ ခါးသီးလွန်းသကွယ်... :(
အမလေး.. ပလုတ်တုတ်.. ရှေ့မှာ အပြာရောင် မြစ်ကြီးပါလား.. :D
နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ခံစားချက်တွေချင်း တူနေ၏.. ဒီလို ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ရေးချင်နေတာ.. ဘယ်က ဘယ်လို စရေးလို့ ရေးရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ..
တကယ့် သိင်္ဂါရရသပဲ.. :)
ကဗျာလေးက အရမ်းကောင်းတယ်... စကားလုံးပြာပြာတွေ.. နှင်းပြာပြာတွေ... ကိုပျာယိပျာယာ ဖတ်သွားပါတယ်..။
အပြာရောင်နိုဝင်ဘာလေးကို Happy Sweet December မှာ ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ် အင်ကြင်းရေ။
ရက်ပေါင်း လပေါင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ချစ်တဲ့သူနှစ်ယောက်ရဲ့အပြာရောင်နိုဝင်ဘာလေးအဖြစ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာ ရပ်တည်နိုင်ကြပါစေလို့။
မိုက်တယ် .. ကိုယ်ပါလိုက် စီးမျောသွားတယ် ..း))
စာတွေ လိုက်မဖတ်ဖြစ်တာ ကြာသွားပြီ အင်ကြင်းရေ...
အနမ်းတွေကို ဝေမျှစားသုံးပစ်လိုက်တယ်.... ဆိုတော့ ပြာနှမ်းကုန်မှာပဲနော် ... :P
ပြာပြာသလဲ မဖတ်ပဲ ပြာတာတစ်ယောက်လို သိမ်းကျုံးပြီး ဖတ်သွားပါတယ်... :)
C Box မမြင်လို့ ဒီမှာနောက်တစ်ခေါက် ရေးလိုက်တယ်။
နှစ်လီနှစ်ဝ လိုအင်ဆန္ဒများ ပြီးပြည့်စုံပါစေ အင်ကြင်းရေ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာလေး ညီမ ရေ
ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ဝင်ဘာရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အလှကို ဒီမှာရှာတွေ့ပြီ ညီမလေးရေ။ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ အပြာလဲ့လဲ့...တကယ်လှတယ်။
ကိုယ်စာတွေမရေးခင်ကတည်းက ညီမလေးအင်ကြင်းဘလော့ဂ်ကို လာဖတ်နေကျး) အရေးအသားတွေချစ်စရာကောင်းတယ်။